Zimbabwe governor says individuals and companies hold $1.3 billion in foreign currency accounts – Nehanda Radio
Zimbabwe governor says individuals and companies hold $1.3 billion in foreign currency accounts
On Jul 1, 2019 17,066
Zimbabwe’s central bank governor John Mangudya said on Monday individuals and companies hold $1.3 billion in foreign currency accounts after the Finance Minister announced that individuals will be allowed to withdraw cash U.S. dollars from those accounts.
Zimbabwe made its interim currency, the RTGS dollar introduced in February, the country’s sole legal tender last Monday, ending a decade of dollarisation and taking a another step towards relaunching the Zimbabwean dollar.
Mangudya said on Monday the southern African nation will initially print 400 million Zimbabwe dollars, which will be gradually introduced in circulation to fill gap left by end of dollarisation.
May 28, 2021 11,323
He also told lawmakers in parliament that $525 million has been traded on Zimbabwe’s official interbank market since its launch in February. Reuters
John MangudyaRTGS dollarRTGS dollarsZimbabwe Dollar
Madinda anoints Lulu
Zimbabwe to initially print 400 million Zimbabwe dollars- RBZ governor
Jul 31, 2021 24,846